इन्टरनेट मा आय को स्कोप धेरै व्यापक छ: मान्छे को एक विशाल संख्या निरन्तर पैसा कसरी अनलाइन बनाउन केही नयाँ तरिका खोजिरहेका छन्। कसैले वेबसाइटहरू, कार्यक्रम वा खेल सिर्जना बुझाउँछ; अरूलाई व्यापार कुराहरू, इलेक्ट्रोनिक कुञ्जीहरू, खाता र थप मा लगे। एकदम प्रसिद्ध र संसारको मुद्रा व्यापार को क्षेत्र भनिन्छ सकिन्छ सबै भन्दा धेरै लोकप्रिय। यो वित्त को दुनिया मा पोख्त र विनिमय परिवर्तनको प्रमुख घटनाहरू विभिन्न विश्लेषण गर्न सक्षम छ निम्ति एक वास्तविक बोनान्जा छ।
मुद्रा व्यापार खण्ड क्षेत्रमा एक नम्बर पहिचान। एक दलाली मंच र मुद्रा जोडी मा व्यापार जडान गरेर इन्टरनेटमा मुद्रा व्यापार - सबै भन्दा प्रसिद्ध बजार "विदेशी मुद्रा" छ। पैसा कमाउन अर्को रोचक तरिका बाइनरी विकल्प सकिन्छ। यो पहिले नै विभिन्न वेबसाइट, ब्लग र फोरम मा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ; तपाईं शायद यस्तो सेवा, जहाँ जो कोहीले व्यापार विकल्प सुरु गर्न सक्नुहुन्छ को विज्ञापन देखेको छु। ब्यानर विज्ञापन, स्क्रिन सेभर र पाठ लिंक को एक किसिम - ती नै विकल्प मा कमाउन संभावना बारे यो सबै shouting।
यस लेखमा हामी बस यस्तो आय उत्पन्न तरिका बारेमा कुरा हुनेछ। तर, यो चाँडै मान्छे को एक महान नम्बरको ध्यान आकर्षित र साथ सोभ्को सिकार को पैसा गायब हुन सक्छ जो एक दलाल, एउटा विशिष्ट सन्दर्भ हुनेछ। FrontStocks.com परियोजना भनिन्छ। यसको बारेमा समीक्षा हामी थप परियोजना को प्रकृति सिक्न सेवा बारे जानकारी को मुख्य स्रोत रूपमा प्रयोग गर्नेछ।
विकल्पहरू अर्को परियोजना
यो सबै एकदम सामान्यतया सुरु - एउटै विज्ञापन यस दिन अवस्थित अन्य कार्यक्रम दर्जनौँ किनेको छ। यस्तो दलाल ती सबै मुद्रा जोडी लागि आधारभूत पूर्वानुमान बनाउन, कुनै समय पैसा धेरै बनाउन प्रस्ताव, त्यसैले धेरै छन्। परियोजना को डेवलपर्स अनुसार, एक लाभ यहाँ गर्न र सबैलाई सक्छ, मुख्य कुरा हो - सही छनौट गर्न।
एउटै कुरा (FrontStocks समीक्षा रूपमा) अन्य समान परियोजनाहरू बारेमा लेख्न गर्नेहरूलाई भन्छन्। मानिन्छ यहाँ सबै कमाउन: जहाँ तपाईं ध्यान दिएर मुद्राहरू को आन्दोलन पूर्वानुमान गर्न र निरन्तर ती जोडे जसलाई तपाईंलाई काम वरिपरि अवस्था विश्लेषण, उद्धरण निगरानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा, विपरीत। बाइनरी विकल्पहरू सबै सजिलो। वृद्धि र गिरावट: त्यहाँ दुई बटन छन्। आफ्नो रुचि - यो यो समय को अर्को अवधिमा विनिमय दर परिवर्तन कसरी छ। FrontStocks समीक्षा अनुसार, यो परियोजना सुरुमा एक प्रकारको मंच तपाईं बस मुद्रा गरेको व्यवहार मा बाजी राख्न आवश्यक जहाँ रूपमा प्रस्तुत भएको थियो।
सम्पूर्ण लहर को विषयगत स्रोतहरू यो दलाल सन्देशहरू मा एक वजन थियो। प्रयोगकर्ता, फैलाउने यसको बारेमा जानकारी काम अवस्था, लाभ र सिस्टम को बेफाइदा वर्णन। त्यहाँ पनि वर्णन र थिए जस्तै न्यूनतम शर्त ($ 1) को आकार जस्तै आइटम, प्रणाली, विभिन्न बोनस, आदि (सबै जो हामी एक सानो पछि थप विवरण विचार गर्नेछौं) को भाग मा कुनै आयोग।
सामान्य मा, FrontStocks समीक्षा द्वारा उल्लेख रूपमा, कम्पनी काम गर्दछ योजना सरल: यो पनि ग्यारेन्टी थियो प्रयोगकर्ता आफ्नो पैसा प्रणालीमा ल्याउन भनेर भरोसा। को भविष्यवाणी बनाउने, लेनदेन विभिन्न प्रकारका प्रवेश मुद्रा भविष्य पाठ्यक्रम परिवर्तन कसरी - बाइनरी विकल्प व्यापार गर्न तिनीहरूलाई तिनीहरूले गर्न सक्छन् अर्को। मुद्रा को मूल्य वास्तवमा वास्तविक जीवनमा वृद्धि भने, र प्रयोगकर्ता उपयुक्त दर बनाएको छ (कि, वास्तवमा, अंदाजा छ), यो आफ्नो winnings (आय) दूर लाग्छ। FrontStocks लिमिटेड विभिन्न समीक्षा केही मानिसहरू सफलतापूर्वक सही भविष्यवाणी बनाउने र आय लिएर, परियोजना यसको गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न व्यवस्थित भनेर प्रमाणित। सायद प्लेटफर्म को यो अवधि सहभागी सबै भन्दा ठूलो सम्भव नम्बर आकर्षित गर्न र यसरी प्रणाली अधिकतम स्रोतहरू बनाउन अर्डर प्रदान गरिएको छ। कम से कम, यो plausible गरिएको छ। हामी, मान्छे त्यहाँ वास्तवमा तिर्न भनेर दावी "FrontStoks" को समीक्षा को धेरै laudatory कि पाएका छन्। छैन अचम्मको कुरा, धेरै दर्ता प्रयोगकर्ता छन्।
नयाँ सदस्य आकर्षित छैन अन्तिम भूमिका स्रोत को प्रशासन देखि प्ले छन् र विशेष प्रस्ताव। विशेष, यो प्रतिशत 35 को जम्मा मा एक बोनस छ। सायद, को पाठ्यक्रम, यो पैसा लिन प्रयोगकर्ता प्रोत्साहन गर्न मात्र यस्तो पाठ्यक्रम हो, तर समर्पित FrontStocks समीक्षा कम से कम, उहाँलाई मात्र बारेमा भन्न।
मौका बस यो साइटमा सहभागीहरू भेटेपछि पाएको योगदान को तेस्रो भन्दा बढी प्राप्त गर्न। र केही अन्य कम्पनीहरु भन्दा एक उच्च प्रविष्टि सीमा बावजुद सबै यो।
प्रतिशत 35 को यो बोनस साथै अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रम थिए (उहाँले बाटो गरेर, खातामा सञ्चय $ 100 को राशि यदि काम)। उदाहरणका लागि, 50% को मामला मा एक बोनस, प्रयोगकर्ताले आफ्नो खातामा पहिलो भरना बनाउँछ भने। सहमत प्रस्ताव धेरै तिनीबारे राम्रो हेर्न (विशेष गरी यस प्रकारको अन्य साइटहरु तुलना); र परियोजना को प्रयोगकर्ता बीच यति लोकप्रिय पर्याप्त छिटो जित्यो छ।
निस्सन्देह, देखि कम्पनी देखाईन्छ थिए जो कुनै पनि थप वा कम प्रत्ययनीय ग्यारेन्टी, बिना तेजी आफ्नो गतिविधिहरु सुरु गर्न सकेन। FrontStocks.com समीक्षा वर्णन अनुसार, ती परियोजना 2009 देखि सञ्चालन भएको एक पत्यार पार्र्ने कहानी, पहिले थिए,; दोस्रो - सम्पूर्ण प्रणाली एक ठूलो कम्पनी (वास्तविक एकाइ), जो पनि आफ्नो प्रस्ताव केही तथ्य को एक guarantor रूपमा कार्य लागत कि; र तेस्रो - विज्ञापन को एक ठूलो संख्या, उदार आयोजकहरु द्वारा लागि भुक्तानी। यी सबै कारक अझ मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मानिस साँच्चै दलाल आफ्नो पैसा विश्वास गर्न सुरु गरिएको छ जो को प्रभाव अन्तर्गत छ।
सहभागीको नजरमा धेरै वजन थिए र दलाल प्रशासन को भुक्तानीको लागि लिखित थिए, शायद, "FrontStoks" को समीक्षा। तपाईं विभिन्न स्रोतहरू जस्तै सिफारिसहरू हेर्न भने, तपाईं समीक्षा को भाग यस कारण को लागि, एक व्यक्ति (धेरै खाता) द्वारा लेखिएको थियो नोटिस सक्छ, जस्तै प्रयोगकर्ता यी साइटहरु मुद्दा चेतावनी प्रशासन। त्यो स्पष्ट मानिसहरूले यसलाई आफ्नो पैसा लगानी प्राप्त गर्न, कम्पनी को दर्जा धोखा प्रयास हरेक तरिका देखिने छ। र जसलाई यो लाभदायक प्लेटफर्म को मालिक भने हुन सक्छ?
जम्मा / निकासी विधिहरू
अर्कोतर्फ Bribing, र जम्मा र जो व्यापार सञ्चालन गर्न सकिन्छ धन, को संवितरण को तरिका को एक विस्तृत विविधता। दलाल FrontStocks को समीक्षा रूपमा, हामी यहाँ सबै रूसी व्यापारी विनिमय विधिहरू लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक काम: बैंक स्थानान्तरण, कार्ड, WebMoney र अरूलाई। त्यो, $ 100 को न्यूनतम जम्मा छ सक्छन् व्यापार विकल्प रुचि छ जो कोहीले। र लाभ (85%) को दर खेलाडीहरू आकर्षित गर्न अर्को तरिका रूपमा सेवा गर्न सक्छ, जो, धेरै पनि छन्।
निस्सन्देह, वास्तवमा, यो परियोजनामा लगानी गर्न हुँदैन। यो छ - यस्तो तरिकाले संगठित गरिएको छ जो एक स्पष्ट शङ्कास्पद संरचना, व्यापारीहरु बाट सकेसम्म धेरै पैसा लोभ्याउन गर्न। तर, यसको वेबसाइट यसको गतिविधिहरु, रूपमा साथै विभिन्न समीक्षा को शिखर मा, यो सम्भव प्लेटफर्म को फाइदाहरूको बारेमा जानकारी पाउन थियो: यो कारण माथि उल्लेख लगानीकर्ताले र सुरक्षा को एक अधिकता उपस्थिति धेरै विश्वसनीय छ कि बाइनरी विकल्पहरू काम गर्न नयाँ दलाल छ। साथै, यो नै आरोप छ - विशेषज्ञहरु दर्जनौँ संलग्न जो एक प्रमुख व्यापार परियोजना।
पनि यहाँ, उदाहरणका लागि, मुद्राहरू को एक विस्तृत श्रृंखला कारोबार गर्न सकिन्छ भनेर शुरू भएको थियो। बाइनरी विकल्प क्षेत्रमा पैसा बनाउन उपकरण हो। अधिक विकल्प, को उहाँले तिनीहरूलाई केही को आन्दोलन बुझ्न सकिन्छ, यो व्यापारी लागि राम्रो। फलस्वरूप, "Frontstoks" (मान्छे को समीक्षा यस पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ) अझै धोका को पहिलो समीक्षा पछि तुरुन्तै अलग गिर जो राम्रो स्थितिमा, रहन गर्दा, पैसा धेरै जम्मा गर्न सक्षम थियो।
सुन्दर "परी कथा"
वास्तवमा, नयाँ दलाल को कथा, तपाईं विकल्प मा गर्न अनुमति दिन्छ, केवल एक परी कथा थियो। कम्पनी को सबै जो दीर्घकालीन र यो संग सफल सहयोग, सम्भवत, आदेश अन्तर्गत लिखित थिए साथ व्यवहार गर्नुभयो FrontStocks, समीक्षा। तिनीहरूलाई फेला गर्ने मान्छे, बस भ्रममा थिए, र त्यो आफ्नो थप दर्ता गरायो। सुरुमा, प्लेटफर्म ग्राहकहरु को विश्वास गरिन्थ्यो।
आयोजकहरु धेरै राम्रो मंच मा विभिन्न पोस्ट गरिन्छ एकै समयमा, शुरू आफ्नो साइट वर्णन विभिन्न ब्लग, को कतै दर्ता फोटो कम्पनी पेश अफशोर क्षेत्र, जो र सम्बन्धित दलाली केन्द्र। र कुनै एक साइट बस बन्द सक्छ।
टिप्पणी देखाउनुहोस् रूपमा हालै स्रोत, यसको निरन्तरता सफलता र थप कमाउने मौका प्राप्त सम्भव पुनरुद्धार विश्वास सम्म। तर साथै कार्य गर्न नै बजार खण्ड अन्य कम्पनीहरु को एक नम्बर, FrontStocks.pro (समीक्षा यसलाई प्रमाणित) असफल भयो। सेवा स्थायी रूपमा बन्द भएको थियो।
जीवनमा, कुनै कुरा के लाभ को ब्याज क्षेत्र, विकल्प खेलाडीहरू केहि ल्याउन सकेको छैन। आफ्नो पैसा गुणन इमानदार तरिकामा, कमाएको र व्यापार खातामा राखिने जारी भएको थियो, बस हराए। आखिर, हामी अगाडि छैन पनि आफ्नो खाता मा पैसा को सुरक्षा ग्यारेन्टी बैंक छ। तिनीहरूले प्रत्येक एक धेरै फरक सम्बन्ध दलाल छ। लगानीकर्ताले मा प्रभाव उपकरण, जो समान परियोजनाहरू छन्, वित्तीय पिरामिड देखि उधारो। यो पनि सकारात्मक समीक्षा, एउटा सक्रिय संबद्ध कार्यक्रम र यति मा रेखाङ्कन गरी सामूहिक विज्ञापन को जडान तथ्यलाई मा प्रकट भएको छ। सबै जम्मा जम्मा, त्यसपछि परियोजनाको संस्थापक गायब: वास्तवमा, यो स्पष्ट छ, प्रशासकहरूले एक साँच्चै बनाउन परियोजना को संभावनाहरु बारेमा थिएन।
उत्पादन को न्यूनतम रकम कमाउन व्यवस्थित गर्ने व्यापार मान्छे, को प्रक्रिया मा पनि आफूलाई बेइमान मालिक मंच को सिकार फेला परेन। उदाहरणका लागि, परियोजना समीक्षा वर्णन मा, अक्सर खाता अवरुद्ध गर्न subjected थिए भनेर याद गर्नुहोस्। केवल एक खाता - नै सजिलो थिएन प्रवृत्ति प्रत्येक किनभने ट्र्याक। तपाईं यसलाई गुमाउन भने, तपाईं सिस्टम पहुँच गुमाए, र मानिस एउटा सन्देश छोड्न सक्नुहुन्न। निस्सन्देह, यो धेरै deluded मान्छे आइपुगे जस्तै अन्य साइटमा गर्न सकिन्छ। स्रोत को प्रसिद्धि वितरण र कारण यो यो धेरै लगानीकर्ताले बस यो भाग लिन विचार इन्कार कसरी भन्न असम्भव छ।
स्रोत आयोजकहरु निवेश धन वास्तविक पहुँच छ भने पनि, कुनै पनि अन्य अवस्थामा के गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यसैले व्यापार हुनेछ जो माध्यम सेवा जाँच गर्न भूल छैन सिफारिस गरिएको छ।
यसलाई तुरुन्तै भर्चुअल खाता खोल्ने पछि, प्रणाली तपाईं लाभदायक ट्रेडों देखाउने हुन सक्छ। तर, सम्पूर्ण व्यापार रणनीति को असली मुद्रा ब्यालेन्स मा परिचय निकै मान्छे यस खेलमा निवेश सबै पैसा गुमेको छन् भनेर हदसम्म, प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ तुरुन्तै पछि प्रतिक्रिया तिनीहरूले साइट http://FrontStocks.com बारेमा भन्न रूपमा।
"ग्यारेन्टी" अन्तर्गत वेबसाइटमा संकेत थियो भने साँच्चै - एक कल्पना, त्यसपछि सबै थप आरोप सफल सम्झौताहरू संदिग्ध छन्। आखिर, ब्याज कमाउन आशा गर्ने व्यापारीहरु लागि योगदान जम्मा गर्न, छ स्पष्ट सबै अरू माथिको स्रोत मालिक मा हावी छ। त्यसैले उनीहरूसँग संवाद गर्न राम्रो छ।
आज भने गरिएको छ रूपमा, मान्छे, केवल आफ्नो पैसा गुमाए। अचानक आफूलाई यस्तो परियोजना सिकार फेला भने, चिन्ता छैन। वास्तवमा, पैसा व्यापारीहरु प्रबन्ध, परियोजना शुरू गर्ने मान्छे FrontStocks, असम्भव बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया किनेको छ प्राप्त गर्न। धन बाइनरी विकल्प अन्य खाताहरूमा विनियोजन गर्न सकिएन; अज्ञात एक्सचेंजर्स मार्फत बाहिर cashed र एक अज्ञात दिशा मा लगिएको। तिनीहरूलाई कसरी पाउन? स्पष्ट यस बारेमा नै कुरा र यो आवश्यक छैन लाग्छ।
वेबसाइट FrontStocks फिर्ता (तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ र बारेमा प्रतिक्रिया) पूर्ण रोकियो। अब त्यहाँ विज्ञापन छ कि एक पृष्ठ बस हो। पनि यस्तो तरिकाले, सायद, प्रशासन केही पैसा व्यावसायिक विज्ञापन देखाउन को लागि कमाता।
आज, तपाईं FrontStocks जानकारी खोज भने, समीक्षा उजुरी बारेमा र परियोजना ठगी सूचीमा हस्तान्तरण गरिएको छ कि मात्र जानकारी हुनेछ। तसर्थ, हामी यस स्रोत उहाँले योग्य पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूको भरोसा गुमाए के पायो भनेर निश्चय साथ भन्न सकिन्छ।
तर आयोजकहरु को अगाडी भाग्य लागि, यो तिनीहरूले विकल्पहरू काम गर्न केही थप कम्पनीहरु सुरु हुनेछ सम्भावना छ। तपाईं लड्न आवश्यक किन र छ।
वास्तवमा, सुरु गर्न यस क्षेत्रमा काम हुन सक्छ। जहाँ मान्छे साँच्चै नियमित आय केही स्रोत आफ्नो सोख आर्थिक छन् उदाहरणहरू छन्। तर यो स्पष्ट छैन http://FrontStocks.com.ru जस्ता परियोजनाहरू छ। अनुभवी सहभागी समीक्षा व्यवसायीक चाँडै यस स्रोत केहि गर्न बन्द हुनेछ भनेर निर्धारित तर्क।
वर्तमान मा व्यापारी गरेको मंच को सबै काम एक फरक तरिका निर्माण गरिनेछ। उदाहरणका लागि, विज्ञापन अभियान को पाठ्यक्रम FrontStocks लागि गरिएको छ कि यी आविष्कार बिना आय को वास्तविक इतिहास हटाइनेछ। आखिर, 2009 मा कम्पनी सफल भएको छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले पक्कै पनि कम से कम एक प्रेरक कहानी हुनुपर्छ। तर, हाय, सबै समाचार 2013 साल मिति छन्, र 2014 मा स्रोतहरू को समस्या सुरु भयो। कुनै स्थिरता र लामो काम परियोजना मा सबै देखाइएको छैन।
भविष्यको लागि सुझावहरू
तपाईं व्यापार पैसा लगानी गर्नु अघि, दलाल बारेमा थप जान्न। कम्पनी डोमेन दर्ता गरिएको छ कसरी लामो जाँच गर्नुहोस्। यो सूचक लागि, हामी एक समूह 2011 देखि 2010 (र यति मा) को सञ्चालन गरिएको साँचो कथाहरू रूपमा निष्कर्ष आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो - यो पर्स र भुक्तानी प्रणाली। आफ्नो व्यापार को स्तर अनुमान द्वारा काम हो साइटहरू, को प्रतिष्ठा जाँच गर्नुहोस्। Webmoney सिस्टम मा, उदाहरणका लागि, यो धेरै सजिलो छ। सबै डाटा कम्पनी अध्ययन गर्न खुला छन्। अर्को अवस्थामा, बस धेरै सकेसम्म समीक्षा र विनिर्देशों पढ्न प्रयास गर्नुहोस्। कम्पनी न्यूनतम रकम भुक्तानी यदि तपाईं एक नमूना लगानी गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं बस बाइनरी विकल्प व्यापार गर्न ( "FrontStoks" को चारा घोटाला सानो अनुभव खेलाडीहरू समातिए को मामला मा) सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो फरक विषयगत र्याङ्किङ्ग अध्ययन गर्न उपयोगी छ।
तिनीहरूले तपाईं कार्यालय टिप्न, शुल्क को आकार लाभ दर, Recharge र यति मा किफायती तरिका आधारमा रुचि हो एक ठाउँमा मौका धेरै प्रस्ताव थाह गर्न प्रदान।
यी सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाईँले थप र कम्पनीको मूल्यांकन केही विशेषता प्राप्त गर्नुहोस्। तसर्थ, तस्वीर थप पूरा हुनेछ।
अन्य खेलाडीहरू को राय
निस्सन्देह, समीक्षा बारेमा पनि छैन भूल गर्नु हुँदैन। त्यहाँ सम्पूर्ण स्रोतहरू जहाँ तपाईं विकल्प संग कुनै पनि साइट को विवरण पाउन सक्नुहुन्छ छन्। अर्को प्रश्न यो तपाईं यस्तो समीक्षा भरोसा निश्चित गर्न आवश्यक छ, घटनाहरु देखाएका छन् कसरी हाल छ। आखिर, भुक्तानी गर्दैन अन्त, र FrontStocks, मा, हामी सकारात्मक समीक्षा लेख्न, फेरि भाग लिन मान्छे कल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले यो व्यवसाय सुनेका नगर्ने ती, साँच्चै प्रस्ताव रुचि र यसलाई लिन सक्छन्।
त्यसैले, तिनीहरूलाई केही साँचो होइन, मनमा राख्न केही समीक्षा भुक्तानी गर्न सक्छ। समीक्षा को 60-70 प्रतिशत तपाईं र जानकारी को सबै भन्दा उपयोगी स्रोत लागि हुन सक्छ। तपाईं आफैलाई लागि पुन: प्रयास गर्न विकल्प व्यापार फेरि नयाँ बजार अवसर खोल्न र यसलाई आफ्नो शक्ति प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने यो खोजी गर्न आवश्यक छ।
ताजा रस - स्वास्थ्य लाभ केंद्रित।